आमाबाबुको लागि आवश्यक मानक मान्य परीक्षण
विद्यार्थी र आमाबाबुको लागि रणनीति र अध्ययन
by डेरिक मेडोर
मानकीकृत परीक्षण तपाईंको बालबालिकाको शिक्षाको मुख्य अंश तेस्रो कक्षामा सुरु हुने हुन्छ। यी परीक्षणहरू न केवल तपाईंको र तपाईंको बच्चाको लागि महत्त्वपूर्ण हो, तर शिक्षकहरू, प्रशासकहरू र तपाईंको बच्चालाई पनि विद्यालयमा पनि। विद्यार्थीहरूले यी आकलनहरूमा कसरी कति राम्रो काम गर्ने आधारमा एक ग्रेड दिइएको छ रूपमा स्कूलहरूको लागि धेरै उच्च हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, धेरै राज्यहरूले शिक्षकको समग्र मूल्याङ्कनको भागको रूपमा मानकीकृत परीक्षण स्कोर प्रयोग गर्दछ।
अन्तमा, थुप्रै राज्यहरूले यी पदोन्नतिहरूमा ग्रेड पदोन्नति, स्नातक आवश्यकताहरू, र चालकहरूको इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने क्षमता सहित यी स्ट्याकहरूसँग जोडिएको छ। यी परीक्षण-लिने सुझावहरू तपाईंको बच्चालाई परीक्षणमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सहयोग गर्न पछ्याउन सकिन्छ। तपाईंको बच्चाको साथ यी परीक्षणहरूको महत्त्वलाई छलफल गर्नेछ उनीहरूलाई उनीहरूको सबै भन्दा राम्रो काम गर्न र यी सुझावहरू पछ्याउन उनीहरूको प्रदर्शनमा मद्दत गर्न सक्छन् ।
तपाईंको बच्चालाई आश्वस्त पार्नुहोस् कि त्यो सबै प्रश्नहरू सही रूपमा पास गर्न को लागी जवाफ दिने छैन। यो आशा छ कि विद्यार्थीहरूले सबै प्रश्नहरू सही रूपमा जवाफ दिन्छन्। त्यहाँ त्रुटिको लागि सधैँ कोठा हो। थाह छ कि तिनीहरूले पूर्ण नभएका छैनन् परीक्षणको साथ केहि तनाव समाप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईंको बच्चालाई सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रयास गर्न र कुनै पनि खाली छोड्न नदिनुहोस्। अनुमान लगाउन कुनै दण्ड छैन, र छात्रहरूले खुला-समाप्त वस्तुहरूमा आंशिक क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई थाहा छ कि मेटाउन गलत पहिलो हो किनकि यसले अनुमान लगाउन बाध्य भएमा तिनीहरूलाई सही उत्तर प्राप्त गर्ने उच्च मौका दिन्छ।
तपाईंको बच्चालाई सम्झनुहोस् कि परीक्षण महत्वपूर्ण छ। यो सरल लाग््छ, तर धेरै आमाबाबुले यो पुन: दोहोर्याउन असफल भए। प्रायः छोराछोरीहरूले उनीहरूको सबै भन्दा राम्रो प्रयासलाई ध्यान दिनेछन् जब तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरूका आमाबाबुको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंको बच्चालाई बुझ्न समय बुद्धिमानी रूपमा प्रयोग गर्ने महत्व। यदि तपाईंको बालबालिका प्रश्नमा फंसिएको छ भने, तिनलाई उत्कृष्ट अनुमान लगाउन वा त्यस वस्तुद्वारा परीक्षण बुकलेटमा चिन्ह लगाउन प्रोत्साहन दिनुहोस् र परीक्षणको त्यो खण्ड परिष्करण पछि यसलाई फिर्ता जानुहोस्। विद्यार्थीहरूले एक मात्र प्रश्नमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्दैन। तपाईंको उत्कृष्ट प्रयास दिनुहोस् र सार्नुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बच्चाले सभ्य रातको निद्रा र टेस्ट लिनु भन्दा राम्रो नाश्ता हुन्छ। यो तपाईंको बच्चाले कसरी कार्य गर्दछ कि यो आवश्यक छ। तपाईं तिनीहरूलाई चाहानुहुन्छ कि उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ। राम्रो रात आराम वा राम्रो नाश्ता प्राप्त गर्न वेलाउन उनीहरूलाई चाँडै ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ।
टेस्टको बिहान सुत्नुहोस् एक सुखद। तपाईंको बच्चाको तनावमा थप नगर्नुहोस्। तपाईंको बच्चाको साथ तर्क नगर्नुस् वा टचिलो विषय उठाउनुहोस्। बरु, उनीहरूलाई हँसिलो बनाउन, थप कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, मुस्कान र आराम करो।
परीक्षणको दिनको समयमा तपाईंको बच्चालाई स्कूलमा पाउनुहोस्। बिहानै स्कूल जान्न आफैलाई थप समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई त्यहाँ ढिलाइ दिइनेछ न केवल आफ्नो दिनचर्या फेंकनेछ, तर यो पनि अन्य विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षण अवरोध गर्न सक्छ।
शिक्षकको निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक सुन्न र दिशा निर्देशन र प्रत्येक प्रश्न सावधानीपूर्वक सुन्नको लागि तपाईंको बच्चालाई सम्झाउनुहोस्। प्रत्येक अनुच्छेद र प्रत्येक प्रश्न कम्तिमा दुई चोटि पढ्न प्रोत्साहन दिनुहोस्। तिनीहरूलाई ढिलो गर्न सिकाउनुहोस्, उनीहरूको सहनशीलतामाथि भरोसा राख्नुहोस् र उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो प्रयास दिनुहोस्।
तपाईंको बच्चालाई परीक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्, भले पनि अन्य विद्यार्थीहरू प्रारम्भिक भए। यो मानव स्वभाव हो जुन तपाईं गतिशीलताको साथ अघि बढ्नु भएको बेला गति बढाउन चाहानुहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई बलियो सुरू गर्न सिकाउनुहोस्, मध्यमा ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्, र तपाइँले सुरू गर्नु भएको जस्तो बलियो समाप्त गर्नुहोस्। धेरै विद्यार्थीहरूले उनीहरूको स्कोर अपहरण गरे किनभने उनी टेस्टको तल्लो तेस्रोमा फोकस गुमाउँछन्।
तपाईंको बच्चालाई सम्झाउनुहोस् कि परीक्षण लिनको लागि मद्दतको रूपमा परीक्षण बुकलेटमा चिन्ह लगाउन ठीक छ (यद्यपि प्रमुख शब्दहरू प्रवाह गर्ने) तर उत्तर जवाफका रूपमा जवाफ दिनुहोस् भनी जवाफ दिनुहोस्। तिनीहरूलाई सर्कल भित्र रहन र कुनै पनि भित्ता पूर्ण रूपमा मेटाउन सिकाउनुहोस्।
किनेस्टिकल लर्निंग शैली
पढ्ने व्यापक कार्यपाना: 10 जवाफ
शीर्ष 10 GRE टेस्ट युक्तिहरू
पढ्ने व्यापक कार्यपत्र 1 उत्तर
शीर्ष 15 एक्टिस्ट टिप्स परीक्षण गर्नका लागि सुझाव
राजनीतिक कार्टूनबाट एक विकल्प बनाउनुहोस्
चौथो ग्रेड पठन संवर्धन पुस्तकहरु
कुनै पनि विषयको लागि सर्वश्रेष्ठ अनलाइन ट्यूटोरियल विकल्पहरू 3
टेस्ट6दिनको लागि तालिका तालिका अध्ययन गर्नुहोस्
तपाईं किन आफ्नो परीक्षा भोगिरहनुहुन्छ
हाई स्कूल विद्यार्थीहरूको लागि रचनात्मक लेखन प्रोम्प्ट
मुख्य आइडिया कार्यपत्र3उत्तर कुञ्जी
1 990को सर्वश्रेष्ठ हे मेटल एल्बम
पूर्वावलोकन: Bridgestone Blizzak DM-V2
कार र मोटरसाइकिलें
9 जादुई कीराहरू र तिनीहरूको लोकगीत
टीपीसी गोल्फ कोर्स के हो? (र के गर्दछ 'TPC' को लागि खडा छ?)
टेक्सास विद्यार्थीहरू, के -12 का लागि पब्लिक स्कूलहरू नि: शुल्क सूची
Yesteryear को मेरो घर
10 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अजिक्क देवता र देवीहरू
हेज संयंत्रको रूपमा एक ट्री प्रयोग गर्दै
डोकस: जेन शिक्षकसँग निजी साक्षात्कार
समूह टेनिस खेल: जेल र विश्व भर
Taoist ब्रह्मांडोलोजीको अन्डररको नजर
सिख बेबी नामहरू डीसँग सुरु हुँदै
यस कम्पैक्ट डिस्क को बारे मा अधिक जानकारी को लागि अमेरिका को
बौद्ध धर्ममा ड्रेगनहरू
थर्मोप्लास्टिक बनाम थर्मोसेट रेजिन
4 ग्रीक र ल्याटिन जडहरू जान्न ठूलो कारण
बीस बीटलहरूको हेरविचार गर्ने मार्गदर्शक
सफल रूसी / सोभियत चित्रा स्केटिंग कोच
न्यूयर्क को डायनासोर र प्रागैतिहासिक पशु
मूलको 'बर्डी' र 'इगल': गोल्फले कसरी नियम बनायो
सबैभन्दा रिसीबल प्रयोग गरिएको क्रससोभर बजारमा
विश्वविद्यालय उत्तरपश्चिम प्रवेश
क्रिस्टियानो रोनाल्डो चरण चरण समाप्त गर्नुहोस्
ए व्हाइटटर क्याकेकरको गाइड एडिडी, एडिडी लाइन्स, र भवरपोलहरू
शौक र क्रियाहरु
कलाकार स्पटलाइट: रबर्ट मेसोवेल
पावरबेल प्रारूपमा गोल्फ
शीर्ष 10 Zac ब्राउन बैंड गाने
स्थानीय खाना खाने खाना खाने वातावरण कसरी मदत गर्छ?
© 2020 ne.eferrit.com